Loharanom-pahalalana Nootropic: Reviews, Effects, Dosage
1. Inona no atao hoe Bromantane?
2. Fihetsiketsehana ataon'ny bromantane
3. Bromantane's dosage mety
7. Loharano Bromantane anaty aterineto
Bromantane (87913-26-6) dia fantatra tamin'ny voalohany hoe Ladasten ary avy amin'ny adamantine. Ny voalohany dia novolavolaina tao amin'ny laboratoara sy orinasa mpanamboatra fanafody any Rosia ao amin'ny 1980s. Ny zavatra mampientanentana dia ny fikarohana natao tamin'ny solosaina solika no loharanon'ny fahitana adamantane. Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka niady mafy ireo mpikaroka mba hikaroka momba ny voly sy ny fomba amam-panao.
Tamin'izany fotoana izany ny mpahay siansa dia nitady fanafody antivirus izay afaka manampy amin'ny fanasitranana ny grlu sy amin'ny fitsapana sy fandinihana maro. tsikaritr'izy ireo fa ny adamantine sy ny derivatives dia mihetsika ho mpandray ekipa dopamine ary noho izany dia azo alaina ho toy ny manaitaitra. Ny fahitana dia hita ho toy ny fahatapahana ara-pitsaboana satria ny singa azo ampiasaina amin'ny fampiharana klinika sasany.
Bromantane dia nanjary nalaza tamin'ny mpisera maro nootropic nandritra ny taona maro niaraka tamin'ireo miaramila sy atleta marobe nampiasa izany hatramin'ny 80 farany. Ny bromantane dia miteraka vokatra mampikorontana sy mampidi-doza amin'ny fotoana iray ihany. Na dia toa tsy miraharaha ny fiantraikan'ny tsirairay aza ny vokatra roa, dia mila mahamarika ny zava-misy fa ny Bromantane dia tena tsy mitongilana satria marefo izy ary mampiroborobo azy rehetra.
Nampiasaina hanatsarana ny fanarenana izany taorian'ny asa fanao mahatsiravina. Mbola eo am-pikarakarana ny fikarohana raha azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ara-panatanjahan-tena satria maro ny olona nampiasa azy io taloha no nitatitra fa nampitombo ny fahaizan'izy ireo atleta. Voalaza ihany koa fa ny fampitomboana ny fahamalinana iray sy ny antony manosika azy ireo ary ny hery ara-tsaina ankapobeny.
In 1996, Nogadraina i Bromantane rehefa nahamarika fa nampiasa azy ireo ny atleta sasany mba hahafahan'izy ireo mitsangana sy mamely ny hafa amin'ny Lalao Olaimpika.
Ny hetsika Bromantane amin'ny hetsika dia miankina amin'ny rafitra serotonergic sy dopaminergic neurotransmitter. Hatramin'izao dia efa azonao an-tsaina ny fomba fiasany. Ny vokatr'izy ireo dia avy amin'ny fahatsapana fa ny Bromantane dia manakana ny fivoaran'ny dopamine sy serotonine. Na dia mbola tsy fantatra aza hoe ahoana no mampitombo ny orin-tsakafo ao amin'ny vatana, dia ahiahiana hanao izany izy. Ankoatra izany, ireo toetra anxiolytika izay Bromantane dia mitazona dia vokatry ny fomba hanamafisana ny fanelanelanana ataon'ny GABA.
Vokatr'izany, Ny Bromantane dia manana toetra miavaka raha oharina amin'ny hafa nootropika eny an-tsena. Amin'ny alàlan'ny rafitra Bromantane atao, dia mety hampitombo ny fiantraikan'ny ivon-toerana ambany eo amin'ny rafi-pitantanana afovoany indrindra ny hippocampus sy ny nuclei hypothalamus.
Raha vao mitombo ny astrano astrano decarboxylase sy ny hydroxylase tyrosine, dia misy ny formation of dopamine avy amin'ny tyrosine. Ny dopamine bebe kokoa ao amin'ny atidoha dia midika fa mihabetsaka ny fahatsapana sy ny fahamalinana.
Noho ny fitomboan'ny serotoninina ao amin'ny vatana dia ho hitanao fa misy ny fiakarana ny fahatsapana fahasambarana.
Matetika izy io dia reraky ny atiny, ary manala azy io ny trozona adrenaliny. Koa satria manakana ny vatana tsy ho hafiriana izany, dia manampy amin'ny famenoana indray ny vatana aorian'ny fisedrana. Avy eo dia mampivoatra ny fitsaboana ataonao izy io ary manamaivana anao amin'ny adin-tsaina.
3.Bromantane's dosage mety
Tsara foana ny fampiasana ny dosie marina, satria mitovy amin'ny zavatra hafa rehetra mitaky be loatra ny vokany. Ohatra, raha manapa-kevitra ny handefa dosie tena ambony ianao mba hahafahanao mitoetra ho mailo, dia mety hiafara ny fahatsapanao fahanginana. Ary na dia amin'ny tranga sasany aza ny fanesorana tsimokaretina dia mety hitarika ho amin'ny fijaliana iray vokatry ny voka-dratsiny izay mety hiafara amin'ny fiatrehana ny andavanandrom-piainanao isan'andro. Ny dosia tena ambany, etsy ankilany, dia tsy hanome anao ny valin'ny fanirinao, ary mety hiafara ianao hoe ny Bromantane (87913-26-6) dia tsy miasa ho anao. Mba hisorohana anao tsy handalo eto dia misy torohevitra ho anao; Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra alohan'ny hividianana SARMs
Voalohany, mandanjalanja mandra-pahafantanao ny fomba fiasan'ny vatanao amin'ny fampiasana azy sy ny habetsahan'izay hiaretany. Ny fiantraikany Bromantane dia manomboka mitsambikina avy ambany ambany amin'ny 10mg, ary ny dosage amin'izany dia miankina amin'izay tadiavinao. Amin'ny maha-fanombohana anao, afaka manomboka ianao amin'ny alàlanao alaina indray mandeha isan'andro mialoha ny hampiasanao azy indroa isan'andro.
Ny zavatra iray tokony tokony ho fantatrao dia ny dosie Bromantane dia miankina amin'ny firaisana ara-nofo satria miha-mihetsika haingana amin'ny mpampiasa vehivavy izany. The Bromantane ny antsasaky ny fiainana dia mihabetsaka kokoa amin'ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy. Ny vavy dia mahatratra ora 2.75 hanomboka hahatsapa ny fiantraikany Bromantane raha mila adiny efatra kosa ny fihetseham-po mitovy amin'izany. Koa satria lipophilika be dia be ity, dia tsy voatsabo haingana amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal ity nalaina ity.
Ny dosage Bromantane dia manomboka amin'ny 50-200mg ary ny dosage mihoatra ny 300mg dia tsy soso-kevitra. Matetika dia maro ny olona te handray ny 100-200mg isan'andro no mizara indroa isan'andro amin'ny dikan'ny hoe iray amin'ny 50-100mg amin'ny maraina sy amin'ny hariva. Ny fampiasana izany mandritra ny roa ka hatramin'ny efatra herinandro ho avy dia hanampy anao hahatsapa ny vokatra mety aminao.
Rehefa miresaka momba ny fikorianan-doha isika, dia miresaka momba ny fanangonana fitambaran-tsakafo isan-karazany mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Ny ankamaroan'ny stacks dia ahitana fanafody izay manana tanjona samihafa amin'ny fanatratrarana azy rehetra mandritra ny fotoana fohy. Ny tombontsoa azo avy aminy Ny Bromantane dia hoe be dia be dia be ary azo alaina fotsiny izany na miaraka amin'ny fanampiana hafa. Ireto ny sasany amin'ireo tranokala Bromantane sy ireo tombontsoa synergista izay atolony.
Bromantane, Agmatine, Kava Kava, AcetylCarnitine ary Oilstack
Ity ny iray amin'ireo stacks bromantane mafonja izay manatsara ny fahasalamana, ny fanentanana, ny antony manosika, ary mampihena ny fanahiana.
Bromantane, Citalopram, Clomipramine, Liothyronine ary Agomelatine
Ity tapa-kazo ity koa dia matanjaka amin'ny fiantohana fa manome anao ny fitandremana sy ny fahatsapana izay ilainao.
(1) Bromantane Benefits
Manala ny ahiahy sy ny adin-tsaina
Indraindray ianao dia mety ho reraka ara-tsaina ary mety hahatsapa toy ny efa nahatratra ny teboka. Mandritra ity fotoana ity, mahatsapa ho toy ny fahasambarana ianao dia lavitra lavitra anao. Ara-dalàna, ary ny vaovao tsara dia manampy anao hiatrika ity fahatsapana ity ny fandraisana an'i Bromantane ary hamerina ny fiainanao. Ny sasany amin'ireo tombontsoa Bromantane dia ny fampiroboroboana ny fahatsapan'ny fialam-boly, hampitombo ny fanoheran'ny vatana amin'ny adin-tsaina ary mety hanampy koa hisolo ny atidoha ao amin'ny atidoha izay mety hitera-doza. Vokatr'izany, raha vantany vao mandray an'i Bromantane ianao dia tsy hahita fotoana firy amin'ny alahelo sy tebiteby intsony.
Ireo izay mampiasa an'i Bromantane dia afaka miaiky fa manampy azy ireo hahazo aina kokoa izy rehefa manao ny asany. Ohatra, ny elanelana iray izay toa sarotra dia mihatsara ankehitriny. Tsy tombontsoa ho an'ny maritiora fotsiny izany fa izay rehetra mitaona hanao fikarakarana ara-batana. Ho takatrao fa amin'ny fampiasana ny Bromantane supplement, afaka manao bebe kokoa miaraka amin'ny hery sy tanjaka maro mandritra ny fotoana maharitra ianao. Ho vokatr'izany dia ho gaga ianao hoe hatraiza no ho azonao atao raha tsy reraka be. Noho izany raha liana amin'ny fiatoana ny fiaretanao ianao dia mitombo avo kokoa ny fanamarinana, ny filaharana Bromantane avy amin'ny Phcoker.com dia tokony ny zavatra manaraka tokony hataonao.
Izany dia mamerina sy mampitombo ny asa ara-tsaina sy ara-batana
Amin'ny ankapobeny dia mety hampihena ny asa ara-tsaina sy ara-batana ataontsika noho ny fahanterana sy ny antony hafa. Soa ihany, Bromantane dia afaka manampy anao hamerina izany amin'ny fomba mahatsikaiky. Amin'ny fampitomboana ny taham-pahafatesana izay ahafahan'ny tavy fanasitranana miala amin'ny hetsika ara-batana mafy, dia mihatsara ny fiasan'ny vatana. Raha momba ny asa atao ara-tsaina, dia ho afaka ny hieritreritra amim-pitsikerana ianao ary handray fanapahan-kevitra tsara haingana raha tsy mahasosotra ny atidoha. Aorian'izay, ianao dia hitoetra hatrany amin'ny fisainana ara-tsaina ary tsy mahatsapa ny atidoha intsony.
Fanohanana ny hafanana
Vantany vao mamoaka hafanana kokoa noho ny famoahana ny vatana, dia mety miteraka hyperthermia na hafanana. Vokatr'izany dia mety ho tratran'ny aretina mafy ianao. Ny iray amin'ireo zava-manan'aina Bromantane dia ny manakana ny vatana tsy ho hafanana sy hitera-doza ho an'ny hyperthermia.
Indray mipi-maso ny fiainana dia samy nanahy ny rehetra. Ny fahatsapana ny tahotra na ny fanahiana dia mety ho tsy fahita firy na tsy miovaova eo amin'ny fiainan'ny olona. Mba hisorohana ny fahavoazana toy izany, dia afaka misafidy ianao takes Bromantane.
Mampiroborobo ny angovo izany ary manala ny reraka
Fantatrao ny fahatsapana izay azonao rehefa miala amin'ny asa ianao ary mila manatrika ny fivorian'ny gym. Ny ankamaroanao dia ny halehiben'ny angovo azonao amin'ny farafaharatsiny ary ny fampiakarana ny tongotrao dia mety ho asa. Ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy manisy fiantraikany amin'ny fomba fiatrehantsika ny asantsika ara-batana, fa koa manimba ny fifandraisanao amin'ny fiarahamonina, ny fiainam-pianakaviana ary ny fomba itondranao ny asanao. Na dia maro aza ny olona tsy mahafantatra ny fomba hiatrehana azy, dia ny iray amin'ireo vahaolana mahomby mba hifehezana ny reraka ny fakana an'i Bromantane. Raha mahatsapa ianao fa mety mila hery mitaona ampy haharitra anao mandritra ny tontolo andro dia handray ny fanampiana Bromantane ny zavatra tsara indrindra tokony hatao. Bromantane dia manome hery anao bebe kokoa raha tsy mandrisika anao na dia mahatsapa ho toy ny voakolokolo anao aza ianao ary ny maharatsy anao dia mihaona aminao.
Manatsara ny fomba fianarana sy ny fandrindrana ny hetsika
Rehefa miresaka momba ny fanatsarana ny dingan'ny fianarana isika, dia midika izany fa ny fahafahana mahazo ireo zavatra vaovao dia mihatsara. Bromantane dia mahatonga anao ho mpianatra mahay sy mahomby kokoa. Ankoatra izany, manatsara ny fandrindrana ny hantsana izy io, ary mety handray anjara mavitrika amin'ny fanatsarana ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena izany.
Mampandroso ny rafi-kery ataon'ny vatana
Iza no tsy te hanana rafitra fiarovana tsara? Manampy ny vatanao hamaly ny aretina amin'ny fomba tsara indrindra ny rafi-kery fanamafisana. Ny mahaliana kokoa dia ny hoe avy amin'ny doka voalohan'ny Bromantane izay azonao, ny vatanao dia afaka mamely aretina amin'ny fomba tsara kokoa noho izay mety ho vitanao. Ny fiarovana amin'ny tsimokaretina dia noho ny fitomboan'ny haavon'ny sela B ao amin'ny vatana. Izy ireo no sela fotsy izay manampy ny vatana hiady amin'ny aretina. Midika izany fa amin'ny fampiasana Bromantane, mahazo fiarovana bebe kokoa amin'ny aretina sy ny aretina ianao. Ampidiro any Bromantane antsika ankehitriny ary ampidiro ny fitsidihan'ny hopitaly matetika!
Ampitomboy ny fahatsiarovana
Moa ve ianao tamin'ny toe-javatra iray izay tsy azonao tsaroanao ny zavatra nitranga tamin'ny minitra lasa izay? Mety hiantehitra izany, ary mety hanontany tena ianao hoe inona no mety hanatsara izany. Ny vaovao tsara dia izany Bromantane dia manampy amin'ny fametrahana tahirin-tsarimihetsika sy fitadiavana fahatsiarovana. Ny tombony amin'izany dia ny ahafahanao mahatsiaro foana ny zavatra ilainao. Manatsara tanteraka ny faharetan'ny fotoana fohy sy ny faharetan'ny fahatsiarovan-tena mba hahafahanao mitadidy izany.
Satria ny aty dia vatana lehibe ao amin'ny vatana, tokony hokarakaraina. Manana anjara toerana manan-danja amin'ny fanesorana ny fahalotoana sy ny poizina izy ary manohana ny famafazana fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny famokarana kilaoty. Indraindray dia mety hitera-doza sy hipoitra indray izy io fa ny tsara indrindra dia mety ho azo antoka fa mbola miasa tsara. Ny Bromantane dia nanaporofo ny nanapotehina ny aty, ka ny fikojakojana azy no tena miasa. Ny fanadiovana ny hena koa dia mitondra tombontsoa sasany, anisan'izany ny fatiantoka, manatsara ny hery fiarovan'ny hery fiarovana sy ny fanatsarana ny fahasalaman'ny olona iray manontolo. Ka raha mety te hanao fanovana ianao raha handray tsara an'i Bromantane dia mety ho fanombohana tsara ho anao.
Mitombo ny hery misintona
Ireo izay ao anatin'ny fitondra-tena sy ny olon-kafa rehetra dia tokony hiandrandra mafy amin'ny fahatokisana ny hery misitery satria ilaina amin'ny fahasalamana tsara. Na tsara kokoa aza raha manana hery matanjaka ianao, afaka manandratra ny vatanao ianao, manokatra varavarana mavesatra tsy reraka. Mampihena ny loza mety hitera-doza rehefa manao ny asanao andavanandro. Ahoana anefa no ampidirinao amin'ny tanjakao? Ny fanaovana Bromantane dia iray amin'ireo fomba mahomby izay hanampy amin'ny fampitomboana ny tanjaky ny hozatrao.
Tsy mifanaraka amin'ny soritr'aretina
Ny dikan'ny hoe Bromantane dia tsy mahatonga ny vatanao hiankina amin'ny akora simika. Raha araka ny fandinihana nataonao, raha vantany vao tapitrao ny fakana azy, dia tsy hahasoa anao izany satria tsy ho andevozinao izany. Tsy toy ny fanafody sasan-tsasany izay mampiendaka, ity iray ity dia tsy mampiankin-doha ary tsy hanosika ny soritr'aretina raha vao manapa-kevitra ny tsy hampiasa azy intsony ianao.
Vitsy ny vokany
Rehefa maka fanafody na fanafody ianao dia ara-dalàna fa mety hampijaly anao amin'ny aretina hafa ianao. Ny fahasamihafana dia tonga amin'ny fahavitrihan'ny vokatr'izany. Ny fanampim-panafody sasany dia mety mahatonga anao hijaly vokatry ny voka-dratsiny mahery vaika izay mety hiafara amin'ny hatsaran'ny fiainanao, izany hoe, ny homamiadana, ny ratram-po, ny fanafody amin'ny fo na ny fandavana ny fandefasana taova, fa ny hafa kosa mety malemy. Raha ho an'i Bromatane, dia hanolotra anao ny tombontsoa rehetra izy io raha tsy manatsara ny fahasalamanao. Noho izany, dia ho afaka hitantana ireo fiantraikany ireo ianao ary tsy hisy na oviana na oviana hisy vokany eo amin'ny asanao andavanandro.
Mety hanampy amin'ny famokarana
Nisy fianarana natao tamin'ny totozy lahy, ary nasehony fa nampitombo ny isan'ny sombiny ny Bromantane ary nanatsara ny fihetseham-pony. Amin'ny tazo vavy dia manampy amin'ny fisorohana ny fahaverezan'ny embryon. Ankoatra izany, nanandratra ny fiantohana ara-nofo amin'ny raty izay mety ho vokatry ny dopamine asa amin'ity fanampiny ity.
Afaka miantehitra amin'io fianarana io isika satria ny olombelona dia manana fetin-jaza toy ny mpihaza. Ary miaraka amin'ny olona maro mijaly noho ny olana momba ny fananganana amin'izao fotoana izao, i Bromantane dia mety ho fandrosoana ho azy ireo.
Afaka manampy amin'ny fitsaboana ny Neurasthenia ny Bromantane
Ny neurasthenia dia toe-javatra mahatonga ny olona iray hijaly noho ny tsy fahitan-tory, ny fahakiviana ara-tsaina ary ny herim-po. Ao amin'ny fianarana natao tamin'ny asthenia marary, nidina ambany Bromantane dosage nanamafy ny soritr'aretina ary nanampy azy ireo hatory. Manatsara ny kalitao eo amin'ny fiainana koa izy ireo, ary ny 3% amin'ny marary ihany no nahatsapa ny vokany.
Bromantane dia miantoka fa raha mahatsapa fery ianao, dia mitazona anao hatrany izy rehefa mampitombo ny fahatsiarovanao rehefa mifoha ianao.
Mety hampihena ny fiterahana izany
Tao anatina fianarana natao tamin'ny totozy, dia nahenan'i Bromantane ny areti-mifindra. Nahatratra izany tamin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ireo cytokines fampiasa amin'ny atidoha;
(2) Ny loza mety hitranga any Bromantane
Ao amin'ireo fanampiana rehetra izay tapa-kevitra ny hampiasa, dia mihazakazaka ny mety hisian'ny fijaliana amin'ny fihetseham-po ianao ary mankafy ny tombontsoa. Ny zava-dehibe dia tsy maintsy handanjalanja ny mety ho fisorohana amin'ny vokatra tsara ianao alohan'ny hanapahana raha handray ny fanampiana. Amin'ny tranga misy anay, ny tombontsoa Bromantane dia toa miteraka lozam-pifamoivoizana. Ny ankamaroan'ny vokatra Bromantane dia mahaliana miaraka amin'ny vitsy amin'ireo olona mijaly amin'ny olana mifandraika amin'i Bromantane. Ny mety hampitombo ny henjan'ny voka-dratsiny dia mitondra dosie Bromantane tena avo. Raha maka dosie ambany kokoa ianao, dia mety hampihena ny alahelon'ny fijaliana amin'ny vokatra hafa. Ireto ny sasany amin'ireo vokatry Bromantane mety ho vokatry ny fampiasana azy.
Ny fampidirana dosie avo dia avo dia miteraka fitomboan'ny ADN mifandray amin'ny proteinina prea-amyloid izay misy ifandraisany amin'ny aretin'ny aretin'ny Alzheimer. Tsara ny manamarika fa io fianarana io dia natao tamin'ny manodidina ny enimpolo sy enimpolo sy fahefatra avo lenta mihoatra ny dosage standard prescribed.
Raha mampiasa ny Bromantane ianao mandritra ny fotoana maharitra, dia mety hijaly avy amin'ny zavona orinasa na headache ianao raha toa ka ampiasaina bebe kokoa mihoatra ny 200mg izany. Ny olona sasany dia nitatitra ihany koa fa nahatsapa ho maivana izy ireo rehefa avy naka isan'andro.
Mety hampijaly ny olona sasany izany. Izany dia mety ho marihina amin'ny fananana fihetseham-po tsy mampifaly ao amin'ny vavony, izany hoe, fanaintainana, fihenam-bava, sns. Mba hanoherana izany dia azonao atao ny mieritreritra ny haka ny zava-mahadomelina.
6. Bromantane Uto be Reviews
Bromantane dia efa nampiasaina nandritra ny roa taona, ary raha toa ny mpitsidika dia tokony handalo, dia ity asa ity dia mahafinaritra. Miezaka ny maneho fihetsika hafa amin'ny fanohanana hafa ny olona, ​​saingy io dia mitazona ny marimaritra tsara amin'ny boaty rehetra. Ny fitsapankevi-bahoaka Bromantane rehetra dia ny momba ny habetsahan'ny olona nanananana fotoana tsara noraisiny ary ny fanovana nataony teo amin'ny fiainany. Ireto ny sasany amin'ireo fanadihadiana Bromantane azonay avy amin'ireo mpanjifa izay natoky anay ho loharano Bromantane.
Gongfu dia niteny hoe, "Nanomboka nandray Bromantane aho tapa-bolana lasa izay, ary izay rehetra azoko lazaina dia tiako izany! Voalohany indrindra, nampikorontana ny fahatokisako sy ny antony nanosika ahy izy. Ny fiheverako ny tenako dia ambony ary manantena mandrakariva ny hanomboka andro vaovao aho. Mahatsiaro ho toy ny zava-baovao aho ary tsy vitan'ny hoe nahafaly kokoa ny fiainako ny fiainako saingy nahatonga ahy hanatratra izany koa izany tamin'ny lasa. Afaka miresaka amin'ny mpanjifako amin'ny fahatokisan-tena bebe kokoa noho izay vitako aho, ary nahatsikaritra aho fa manao fivarotana bebe kokoa noho ny nataoko tamin'ny herintaona. Amin'ny maha-mpanao hosodoko ahy, afaka manao ny asako amin'ny hery sy ny herin-tsaina aho ankehitriny, ary mahatsapa aho fa ity fanampiana ity dia hanohy hampiroborobo ny asako. The Bromantane traikefa dia tena tsara tokoa, ary mety hampiako ity fanampiny ity ho an'ireo izay te hanao fanovana eo amin'ny fiainany. " Ny kisary 6 ho an'ny Melanotan-II / MT2 izay tokony ho fantatrao
Hoy i Huang: "Ny asako dia manao tatitra maro, ary vao haingana aho no nanomboka niaina zavona atidoha. Matetika aho no tsy afaka mifantoka amin'ny fifantohana ary mifantoka, ary ny fametrahana fe-potoana dia tena olana. Niatrika olana foana tamin'ny zokiko lahy aho ary vao mainka naharay taratasy fampitandremana. Nahatsiaro ho tsy afa-nanoatra aho ary nanapa-kevitra ny google ary hahita raha afaka mahazo fanampiana aho. Soa ihany, niondrika tao amin'ny supplement bromantane avy amin'ny phcoker.com aho, ary nanankinako azy ireo noho ireo fanamarihana izay naneho fa izy ireo no iray amin'ireo tsara indrindra Bromantane mpamatsy manerantany. Raha ny marina dia tsy mahatsapa ny fahasarotan'ny fifantohana na ny fifantohana aho. Na dia efa niasa hatramin'ny farany aza aho dia nidera ahy foana ny lehibeko. Efa saika very asa aho, fa noho ny Bromantane aho izao. "
Ling dia miteny hoe, "Nifandona tamin'ny fahabangana fahatsiarovana aho raha mbola afaka mahatsiaro. Indraindray aho dia tsy nahatsiaro ny andro tamin'ny herinandro. Tena nanahiran-tsaina aho satria nanary ny zavatra nataoko indray aho raha nanadino ny toerana nametrahako azy ireo. Mbola ratsy kokoa izany, nahatonga ahy nandao ny oniversite io toe-javatra io satria tsy nitsahatra ny fanadinana ahy na dia taorian'ny fianarana mafy loatra aza. Raha tsy nisy namana nanolo-kevitra fa tokony hampiasa an'i Bromantane aho dia nanapa-kevitra ny hanome azy io ezaka. Efa iray volana izao ary nihatsara ny fitadidiako. Tsaroako ny ankamaroan'ireo zavatra manan-danja tokony horaisiko, ary mahatsiaro ho kely indray aho izao. Tsy voatery hampahatsiahy ahy ireo zava-dratsy ireo ny namako. Faly aho fa miverina any an-tsekoly aho ary hatramin'izao dia efa nahavita tsara ny sakafoko aho. Raha mahatsapa toy ny fahavoazan'ny fahatsiarovan-tena ianao, dia midadasika anao izany, izany no vahaolana. Inona àry no azonao andrasana? Order Bromantane from Phcoker ary mahazo ny fanampiana ilainao. "
Hoy i Wang: "Nanampy ahy hiady amin'ny fahaketrahana ny Bromantane, ary tsy mampiasa fanafody hafa intsony aho. Ny fianakaviako sy ireo namako dia saika nandiso fanantenana ahy satria indraindray aho dia afaka niaina alahelo tsy nazava tamiko ary afaka namono tena tatỳ aoriana. Efa nanandrana ny zava-mahadomelina rehetra azonao eritreretina aho, ary tsapako fa nahatsapa ho faty aho. Tsaroako tamin'io andro io izay nanononan'ny mpanolotsaiko zavatra iray atao amin'ny Bromantane, ary tsy noraisiko moramora izany. Mba hanapariahana tantara fohy iray, dia nihatsara be ny fifandraisako tamin'ny asa sy ny fiaraha-miasa amin'ny namana. Ny traikefako Bromantane dia mahafinaritra, ary manoro ahy izany ho an'ireo izay miady amin'ny fahaketrahana. "
Hoy i Juan, "Tiako ho fantatro io rongony io taona lasa izay satria tsy ho nijaly toy ny nataoko aho. Niantehitra foana aho rehefa nanomboka ny alina, satria fantatro fa hiady i II ka hijanona mandritra ny alina. Indraindray ny fanahiana dia hahatratra ahy, ary afaka mitomany mandritra ny alina aho. Na dia taorian'ireo fitsidihana hopitaly be dia be aza dia toa tsy niova. Ny anabaviko dia nitondra ahy Bromantane, ary nandray ny 100mg isan'andro aho tamin'ny volana lasa. Tsy nety misaotra an'i Bromantane aho satria nanomboka tamin'izay tsy dia nahatsapa ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tebiteby aho, ary ankehitriny dia misotro ronono aho nefa tsy misy ny fanelingelenana. Mahatsiaro ho tony aho izao, ary tsy tiako mihitsy ny alina
Hoy i Hui: "Mpanamboatra birao aho ary nanomboka nampiasa ity vokatra ity aho dia nahatsikaritra ny tombony be dia be teo amin'ny tanjaka. Afaka manamboatra mavesatra kokoa mahery kokoa aho amin'izao fotoana izao, nefa tsy manimba ny tenako. Mihamitombo isan'andro ny hozako, ary tsy mitsahatra mijery ny vatako aho. Hametraka ny baiko tsy ho ela aho ary hangataka mpikaroka rehetra izay manantena ny hijery tsara ny hividy Bromantane. "
Hoy i Cheng: "Nanapa-kevitra ny hividy ireo mpandraharaha bromantane amin'ny aterineto aho androany. Nahita azy roa aho, ary te-hiorina amin'ny tsara indrindra. Nopotehiko ny telo tamin'izy ireo ary nanapa-kevitra ny hanome azy ireo fitsapana. Nifandray tamin'izy ireo aho ary nanontany azy ireo momba ny safidiny. Eritrereto izay nitranga? Tranonkala iray ihany no tsy mandefa valiny maody. Nanome ahy valiny tamin'ny antsipiriany i Phcoker.com izay namela ahy ho tezitra. Ny fikarakaran'izy ireo ny mpanjifany dia mitovitovy habe, ary tsapako ny fandriampahalemana mametraka baiko miaraka amin'izy ireo. Tao anatin'ny andro vitsivitsy, navoaka ny baiko, ary holazaiko aminao ny vokatra ao anatin'ny iray volana. Raha te hividy amin'ny mpivarotra izay manome lanja ny mpanjifany ianao dia ity no toerana tokony ho izy. "
7.Loharano Bromantane anaty aterineto
Amin'ny fanamarihana Bromantane izay novakianao dia mety ho liana amin'ny fividianana izany ianao. Nefa ahoana no hividiananao azy? Na dia tsy azonao antoka aza raha hahita Bromantane ao amin'ny fivarotana ao an-toerana ianao, ny fividianana izany an-tserasera dia afaka manampy anao be dia be. Soa ihany amin'ny fampiasana ny aterineto, azonao atao ny mampitaha ny vidiny, ny fijerena sy ny filaminana ho an'ny fanampim-panafana raha tsy miala ny tokantranonao.
Izay tokony ho fantatra alohan'ny hividianana aterineto dia ny tsy fisian'ny tranonkala rehetra. Mila mitandrina tsara ianao, na mety hampidi-doza anao ny fahasalamanao. Ny mbola ratsy kokoa dia ho very ny volanao sy ny fotoana avy amin'ny fividianana. Ny antony dia azonao atao buy Bromantane Izany no fialantsiny ary amin'ny fampiasana azy, azonao antoka fa tsy hanatanteraka na inona na inona ianao. Ny vokatra hafa dia mety hitranga, ary mampihena ny fahombiazany izany. Indraindray ireo mpamatsy vola Bromantane dia mety maniry ny hanambaka olona amin'ny alàlan'ny fivarotana fividianana izay efa nihemotra tamin'ny fanararaotana ny zava-misy fa vita ny tranokala.
Azonao atao koa ny mahita fa nividy ampahany manokana izay nangalarina sy nivadika. Na dia mety ho ilaina aza izany, dia tsy te hampandroso ny tranokala izay maniry ny hangalatra ny hafa. Na dia toa sarotra loatra aza ny fanampim-panafarana, dia mila miezaka mafy ianao tsy hisorohana ny fampiasana azy.
Tsy tianay ny hijaly amin'ireto rehetra ireto, ary noho izany dia manoro hevitra anao izahay ny hampiasa ilay tokana tokana azo antoka Phcoker.com. Maro ny antony tokony hividiananao anay, ary omenay anao ny sasany amin'izy ireo.
Mpivarotra azo itokisana izahay ka afaka mividy Bromantane, ary halefanay any amin'ny toerana misy anao. Mividy Bromantane avo lenta isika izay tsy misy afa-tsy ny fanampiana na ny famenoana. Noho izany, ny fiarovana Bromantane dia tsy zavatra tokony hampanahy anao. Ny Bromantane dia novolavolaina amin'ny toetry ny fomba fanatanjahan-tena, ary tsy isalasalana fa hanome anao ny vokatra izay mendrika anao amin'ny fotoana fohy indrindra. 2019 Fampahafantarana Manomboka amin'ny Gonadorelin Acetate
Ho an'ny vidinay, mety sarobidy izahay, ary tsy mila mandady lalindalina kokoa any am-paosinareo izahay mba hividianana Bromantane. Azonao antoka koa fa hahazo tombony amin'ny volanao ianao amin'ny fanaovana antoka fa ianao fa mahomby Bromantane amin'ny vidiny tsara indrindra eran-tany.
Manolotra fanandramana momba ny fividianana mpanjifa isika mba hahazoana antoka fa ny mpividy rehetra dia manana traikefa maimaim-poana. Ny fahafaham-pon'ireo mpanjifantsika dia tonga aloha, ary ny tanjontsika dia ny mahita ny rehetra mahazo ny tsara indrindra. Ny fikarakarantsika ny mpanjifa dia vonona mandrakariva hihaino ny fitarainana, soso-kevitra, ary ny fanoloran-kevitra ary izany dia eo amin'ny fanjakana ambonin'ny mpifaninana hafa rehetra.
Ny entantsika dia azo antoka, azo antoka ary haingana. Raha vao mandidy antsika Bromantane isika, dia mandefa ny fonosanao amin'ny fotoana fohy indrindra, ary ny fotoana ahatongavanao, miankina amin'ny toerana misy anao. Mividiana Bromantane amintsika androany ary manomboka ny dianao ho salama tsara.
Ny Abstracts Chemical, Volume 139, Issue 1, Fizarana 1, American Chemical Society., 2003, pejy 94
Oliynyk, S., $ Oh, S. (2012). Ny Pharmacology of acro protectors: Fampiharana fampiharana amin'ny fampivoarana ny fahatsarana ara-tsaina sy ara-batana. Biomolecules sy Therapeutics, 20 (5), 446-556
Krapivin, S. V, Sergeeva-SA, $ Morozov, IS (1993), Famarafaran-tsakafo fikarohana electroencephalografika momba ny hetsika bromantane, 116 (11), 515-8
SARM fanampiny ao amin'ny Top 10: SR9009 (1379686-30-2)